Tartan Ciyaareed oo lagu soo gabagabeeyay degmada Hodon – Radio Muqdisho
Tartan ciyaaro ah oo ay ka qeyb galeen dhallinyarada waaxyaha degmada Hodon ayaa lagu soo gabagabeeyay degmadaasi, ayadoo maamulku ay koob guddoonsiiyay kooxdii ku guuleysatay tartankaasi.
Koox ka socotay waaxda October ee degmada Hodon ayaa ku guuleystay tartaankaan oo ay ka qeyb galeen 16 koox oo ka kala socday waaxyaha iyo laamaha degmada Hodon.
Guddoomiyah degmada Hodon Cabdulqadir Cali Kulane ayaa ugu hambalyeeyay dhallinyarada degmada ciyaarta wanaagsan ee ay soo bandhigeen, isagoo sheegay in tartamada noocaan ah ay xoojinayaan is-dhaxgalka bulshada ku nool degmada.
“Waxay qeyb ka tahay is-dhaxgalka bulshada iyo dhallinyarada ee degmada Hodon, waxaana sii wadi doonnaa tartamada noocaan ah” ayuu yiri guddoomiyuhu.
Qaar ka mid ah guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha ammaanka ee degmada Hodon ayaa ka qeyb galay munaasabadda lagu soo xirayay tartankaan oo muddo lix bil ah ka socday gudaha degmadaasi.
Guddoomiye Cirfo oo gaaray Guriceel